Uma Baahnin in Sawir sanadkii hore 2019 lasoo dhigo waxaan u baahanahay Inuu Muuse Biixi Cafimaadkiisa Live uu uga Waramo isagu.
Sunday May 03, 2020 - 07:11:40 in News by Super Admin
Burco_(HWN)-Waxa ay Madaxtooyada Muuse Biixi ay qarinasay 3dii cisho ee u danbeysay in Hogamiyaha Somaliland Muuse Biixi uu ku dhacay faalid (Stroke) taaso lakala garanaynin amaba la
Burco_(HWN)-Waxa ay Madaxtooyada Muuse Biixi ay qarinasay 3dii cisho ee u danbeysay in Hogamiyaha Somaliland Muuse Biixi uu ku dhacay faalid (Stroke) taaso lakala garanaynin amaba la ogeyn meesha uu kusugan yahay ilaa manta.
Taageerayasha Muuse Biixi ayaa soo bandhigay Sawir sanadkii hore 2019 ay wada galeen Muuse, Faysal Cali Waraabe iyo C/Raxman Ciro taaso ay ka dhigayeen inuu yahay sawir imika ay wada galeen.
Shacbiga Somaliland waxay u baahanyihiin inay arkaan Hogaamiye Muuse Biixi oo Shicibkiisala hadla Magaladana dhex lugeeya amaba Saxafada kala gadisan shir jara’id u qabta ee uma baahna in sawir sanadkii hore dadka lagu jahawareeriyo Sidaa waxaa yidhi Siyaasi Xildhiibaan Golaha Guurtida Somaliland katirsan oo Magaciisa qariyay.
Xildhibaankaasi waxa uu raciyay hadalkiisa "Looma baahna in Caruurta yaryar ee Madaxtooyada jooga inay caafimaadkiisa nooga waramaan waxaanu doonaynaa inuu Muuse Biiixi dadka soo hor joogsado oo uu ka hadlo Caafimaadkiisa”
Gabagabadii ilaa hada madaxtooyada Somaliland ayaa wax war ah kazsoo saarin arinkan marka laga reebo Taagerayasha ama ehalka Muuse Biixi oo beeneenaya wararkaasi caafimaadkiisa kusaabsan.